Homemade uye ecological yekuchenesa madiki eimba | Bezzia
Homemade uye ecological yekuchenesa madiki emba
Toñy Torres | 08/05/2021 16:00 | Musha
Aya maitiro ekuchenesa epamba anozobatsira iwe kuchengetedza imba yako yakachena uye nemushonga unouraya utachiona nyore. Chinhu chakakosha kune zuva nezuva, nekuti hapana munhu anoda kushandisa maawa nekuchenesa kwemazuva ese. Zvisinei, mabasa epamba, kunyange achinetesa, anonyanya kukosha. Kwete zvehutsanana chete, nekuti, kuchengeta imba yako yakachena kunokupa nyaradzo nerunyararo.
Izvo hazvireve kuve nekupedza maawa uchichenesa, uine diki sisitimu uye nerubatsiro rweaya ekuchenesa matanho, unogona kuve neako imba iri mumamiriro akakwana uine mashoma mashoma. Uye zvakare, kushandisa zvigadzirwa zvakasikwa zvinotsiva izvo zvemakemikari zvinhu zvine ngozi uye zvinokuvadza nharaunda. Chimwezve chikonzero cheku edza zvimwe zvezvinhu zvekuchenesa izvi.
1 Kuchenesa hunyanzvi mukicheni
2 Imba yekugezera yakakwana neiyi nzira yekuchenesa
3 Matambudziko akaoma panzvimbo huru?
Kuchenesa hunyanzvi mukicheni
Iyo nzvimbo inogadzirirwa chikafu zuva nezuva inofanirwa kuve tembere ye utsanana nehutsanana. Kuti udzivise kuunganidzwa kwebhakitiriya, zvakakosha chengeta midziyo yese yekicheni nemidziyo zvakachena iyo inoshandiswa pakubika. Edza izvi zvekuchenesa zvekugadzira mukicheni, vanokushamisa.
Iyo yemapuranga yekucheka bhodhi: Sasa munyu wakakora pamusoro petafura uye nehafu yendimu sora huni dzese. Mushure meizvozvo, suka bhodhi rematanda nemvura inodziya uye yako yakajairwa sipo. Nenzira iri nyore, huni huni uye hwema zvinobviswa.
Grater: Kubvisa zvakakwana marara echikafu kubva ku grater, ingo gadzira chingwa chekare mushure mekushandisa kwese. Pedza kuchenesa pasi pemvura inodziya uye bvumira kuti mweya uome zvachose.
Bhengi: Mukupisa kwenguva yebhayiko, hunyengeri uhwu huchauya hunobatsira. Paunenge wapedza kubika uye rack ichiri kupisa, kwiza hafu yeeiii pamusoro pechiso. Iwe uchabvisa mafuta nenzira yakapfava uye chengeta bhengi rako rakanyatsoiswa utachiona.
Imba yekugezera yakakwana neiyi nzira yekuchenesa
Hapana chikonzero chekushandisa zvigadzirwa zvemvura kana zvinokuvadza Yakazara nemakemikari, iwe unogona kuve neyako yekugezera yakakwana neaya mateki edzimba.
Bvisa lime: Mushawa, pamapombi uye nepamusoro penzvimbo zvinogara zvichisangana nemvura, mavara emarara anonetsa kubvisa anoonekwa. Edza hunyengeri uhwu, sanganisa mundiro hafu yekapu yekubheka soda uye yakaenzana vhiniga chena kuchenesa. Nyorera nesiponji panzvimbo yekurapwa uye rega iite kwemaminitsi makumi matatu. Shenesa nemvura kuti upedze.
Shower musoro: Iyo yepamusoro inocheneswa kazhinji, asi chakuvhuvhu uye mabhakitiriya anoungana mukati. Iwe uchazoda a kota kapu yekuchenesa vhiniga uye zvikamu zvitatu zvemvura. Sanganisa mushe uye isa musoro wekugeza, rega zviite kweinenge hafu yeawa. Kuti upedze, iwe unofanirwa kungooma zvakanaka usati wamonyora chikamu chekunze kumashure.
Pombi dzakazara: Zvisaririra zvinoungana mumapombi, zvichigadzira utachiona uye nekupa hwema hwakaipa. Dururira 6 mashupuni esoda yekubheka pasi pesinki yako yekudonha. Uyezve wedzera mukombe wevhiniga chena uye rega iite kwemaminitsi makumi maviri kana makumi matatu. Pakupedzisira, wedzera 3 litita emvura inopisa kwazvo zvishoma nezvishoma kubvisa zvisaririra zvakaunganidzwa mupombi.
Matambudziko akaoma panzvimbo huru?
Kubvisa mavara kubva munzvimbo huru hakusi nyore, sezvo zvisingaite kuisa metiresi mumuchina wekuwacha, semuenzaniso. Asi iwe unogona nyore kuchenesa akaomarara metiresi kana masofa stain.
Ropa mavara: Nyorera zvishoma hydrogen peroxide panzvimbo yeropaSiya zviitwe kwemaminetsi mashoma uye bvisa nemucheka wakanyoroveswa wedonje.
Weti nedikita: Nezve stain stain uye weti tsvina, ingo pfapfaidza chena vhiniga pasitepisi nebhodhoro rekupfapfaidza. Rega chigadzirwa chiite kwemaminitsi gumindokumwaya musoda uye bvumira musanganiswa kuti uome zvachose. Kuti upedze, iwe unongofanirwa kubvisa zvisaririra pamwe neyekuchenesa.
Sezvauri kuona, nezvakareruka zvigadzirwa, zviri nyore kuwana uye zvakachipa kwazvo, unogona kuchengeta imba yako yakachena uye nemushonga inouraya utachiona nekukurumidza. Uye newe, Iwe unoziva chero imwe hupusa husina kuchenesa imba hunyengeri?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Musha » Homemade uye ecological yekuchenesa madiki emba
Sport uye nhumbu, zvese zvaunoda kuti uzive
Kana kushushikana kusikakutendera iwe kurara, nyora pasi aya matipi!